भद्दा छालालाई १० मिनेटमा चम्किलो बनाउन सकिने तीन प्राकृतिक उपायहरु - JaljalaKhabar Online Portal from Nepal
प्रकाशित मिति : आइतवार, माघ २७, २०७५
के तपाईको छाला भद्दा देखिन्छ? के यो सुख्खा र फुस्रो छ? के तपाईले थोरै मात्र सिंगार प्रसाधन छालामा प्रयोग गर्दा पनि यो लतपतिन्छ? के तपाईको छाला जति बेलापनि तेल दलेजस्तो चिल्लो देखिन्छ?
भद्दा, सुख्खा, खस्रो , तैलिय छाला भनेको छाला जन्य सौन्दर्य समस्याहरु हुन् । जब तपाई खटिरा अथवा छालाको माथिल्लो परत प्रत्येक दुई महिनामा पुन पलाउछ जस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ, त्यस्तो बेलामा तपाईको छाला सुख्खा तथा भद्दा देखिन्छ ।
जब तपाईको छाला पुन पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ त्यस्तो बेलामा तपाईको शरीरको सतहका छालामा लाखौ मरेका तन्तुहरु त्याहाँ बसिरहेका हुन्छन् । अनि जव ती अनेकौ मरेका छालाका तन्तुहरु झर्छन, त्यहाँ कैयौं तन्तुहरु झुन्डिएर त्यसै बाँकी रहन्छन् ।
भद्दा छालाको ठाउँमा नयाँ छाला पलाउने प्रविधि अपनाउनाले त्यहाँ जम्मा भएका फोहर सफा हुनुका साथै मरेका तन्तुहरु झरेर जान्छ र तपाईले छालामा नयाँ चमक पाउँनुहुन्छ
छालालाई सस्तो अनि सुलभ तरिकाले कसरी पुर्नताजगी बनाउन सकिन्छ?
छालामा पुर्नताजगी ल्याउने भन्दै बजारमा धेरै थरिका सौन्दर्य सामग्री पाइन्छ तर त्यस्ता सामग्रीहरु महंगा पनि हुन्छन् ।
आज हामी तपाईहरुलाई मरेको छालाको ठाउँमा नयाँ तथा चम्किलो छाला पुनप्राप्त गर्न सस्तो र सुलभ उपाय के हुन सक्छ त्यसका बारेमा जानकारी गराउँदै छौं ।
हामीले जानकारी गराउने यो घरेलु प्राक्रितिक ओखतीका लागि तपाईले धेरै पैखा खर्चिनु पर्दैन । त्यसका लागि हामी तपाईहरुलाई सहज तरिका जानकारी गराउँदै छौं । हामीले जानकारी गराउन गैरहेको यो घरेलु सरदाम संभवत हामी सबैको भान्सामा नियमित रुपमा उपलब्ध हुने चिजबिज हो । अनि यो समाचार तपाईका लागि सुखमय पनि हुनसक्छ । तपाई यो छालालाई पुर्नताजगी बनाउने सरदाम दश मिनेटमा तयार पार्न पनि सक्नु हुन्छ ।
हाज हामी तीन बेग्लाबेग्लै सरदामका बारेमा जानकारी गराउँदै छौ जसलको प्रयोग गेरर तपाईले आफ्नो छालमा पुर्नताजगी पाउनु हुनेछ । यी तीन बिधि मध्य कुनै एक प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ ।
१. चिनि प्याक
चिनि प्याक प्रयोग गरेर तपाई आफ्नो छालामा पुर्नताजगि प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ । चिनिमा आबद्ध खस्रोपनाले तपाईको छालामा रहेको फोहरको थुप्रो तथा मरेको छलाको तन्तुहरुलाई सहजै बाहिर निकाल्ने र छालामा ताजगी ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ । चिनि प्याक तयार पार्नका लागि आधा कप जैबिक सेतो चिनि, आधा कप नरिवलको कांचो तेल र कपको एक चौथाई जैबिक भूइकटहरको रस लिनुहोस् । मीश्रणलाई एकै ठाउँमा मिसाउनुहोस्। यसले आफ्नो अनुहारलाई बिस्तारै मसाज गर्नुहोस् र अनुहारलाई चिसो पानीले सफा गर्नुहोस् ।
२. केरा-महको प्याक
पाकेको केरा र महको फेस मास्क बनाउका लागि एउटा पाकेको जैबिक केरा र दुई चम्चा शुद्ध जैबिक मह लिनुहोस् । यसलाई मिक्सचरमा पेल्नुहोस् । अब मीश्रणमा केही थोपा कागतीको रस मिसाउनुहोस् र यसलाई चलाउनुहोस् । मीश्रण प्रयोग गर्नुपुर्व आफ्नो अनुहारलाई जैबीक साबुनले सफा गर्नुहोस् । अव अनुहारमा मीश्रणको लेप दल्नुहोस् र करिव २० मिनेट सम्म त्यसै छाडिदिनुहोस् । अनुहारमा दलेको मीश्रण सफा गर्नका लागि चिसो पानीको प्रयोग गर्नुहोस् ।
३. तातो पानीको बाफ
छालामा मरेको तन्तुहरुलार्ई बिस्तारै हटाउनुहोस् र छालामा रहेको मसिनो प्वालहरुलाई खोल्नका लागि जैबिक साबुनले पखाल्नुहोस् । सर्वप्रथम, आफ्नो अनुहारलाई एउटा तौलियाले ढाक्नुहोस् र बाफ आउँदै गरेको पानीमाथि आफ्नो अनुहार घोप्टो पारेर पाँच मिनेट सम्म अड्याउनुहोस् । त्यसपछि मन तातो पानीले आनुहारमा छयाप्नुहोस् र जैबिक साबुन अनुहारमा दलेर सफा पानीले पखाल्नुहोस् ।
यी माथिका बिधिहरु अपनाएर तपाईले आफ्नो छालामा ताजा, सफा अनि नरमपना पाउनुका साथै छालामा जम्मा भएको फोहर र मरेको तन्तुहरु बाट समेत छुटकारा पाउनु हुनेछ
कस्तो समस्या भएको व्यक्तिले खान हुँदैन लसुन
चट्याङ्गसहित भारी वर्षाको सम्भावना, जिल्ला नै तोकेर मौसमविदले भने- सतर्क रहनू
दाँत चम्काउन चाहनुहुन्छ ? यी ७ घरेलु उपाय अप्नाउनुहोस्
झापाको दमकमा अझै नियन्त्रणमा आएन डेङ्गुः झुल टाँगेर उपचार गरिँदै
कपाल फुलेर हैरान बनायो ? घरबाटै हुन्छ समस्याको समाधान
कृषि उत्पादनमा फड्को मार्दै मकवानपुरगढी, दुधबाट दैनिक १० लाख आम्दानी
कश्मीरको विशेष मान्यता खोसिएपछि भारतका अन्य राज्यको भविष्यबारे चिन्ता
अनुष्काले शेयर गरेको बिकिनी फोटोमा विराट कोहलीको खास कमेन्ट !
‘स्मिथ ढल्दा सबैको धड्कन रोकिएको थियो’
रवि लामिछानेका समर्थक र प्रहरीबीच झडप, चितवन तनावग्रस्त
शालिकरामले झुण्डिन डोरी किनेको सिसिटिभीमा देखियो
तीन पल्ट विहारको मुख्यमन्त्री भएका मिश्राको निधन
चितवनमा तनाव भएपछि प्रशासनले गर्यो सर्वदलीय बैठक, मानवअधिकारीवादी संगठनहरुको पनि अपील
बुधबार काठमाडौं आउँदै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर